I-COAR, TCC Africa ne-AfricArXiv zisayina isivumelwano sokusebenzisana - i-AfricArXiv
Kushicilelwe ngu I-AfricArXiv on I-19th ngo-November 2020 I-19th ngo-November 2020
Siyajabula ukumemezela ukuthi I-Confederation of Open Access Repositories (COAR) kanye ne-TCC Africa ngokubambisana ne-AfricArXiv basayine isivumelwano sokusebenzisana esigxile ekuqiniseni amandla kanye nengqalasizinda ye-Open Science e-Afrika.
Yethulwe ngoJuni 2018, I-AfricArXiv ingumlando oholwa ngumphakathi wokuxhumana ocwaningweni wase-Afrika. Sinikeza ipulatifomu engenzi inzuzo ukulayisha amaphepha okusebenza, okulungiswayo, imibhalo yesandla eyamukelwe (amaphrinta asemuva), izethulo, kanye namasethi wedatha ngokusebenzisa amapulatifomu esisebenza nawo. I-AfricArxiv inikezelwe ukukhuthaza ucwaningo nokubambisana phakathi kososayensi base-Afrika, ukuthuthukisa ukubonakala kokuphuma kocwaningo lwase-Afrika kanye nokukhulisa ukusebenzisana emhlabeni jikelele.
The Isikhungo Sokuqeqesha Ezokuxhumana (TCC Africa), yisikhungo sokuqala sokuqeqesha esizinze e-Afrika ukufundisa amakhono okuxhumana asebenzayo kososayensi. I-TCC Africa iyinhlangano yabalingani abangamasu futhi ngomqondisi wayo ibambe isihlalo ebhodini lezeluleko le-AfricArXiv.
IMOYA yinhlangano yomhlaba wonke ehlanganisa ndawonye izinqolobane ngazinye kanye namanethiwekhi wokugcina ukuze kwakhiwe amandla, kuqondaniswe nezinqubomgomo nemikhuba, futhi kube yizwi lomhlaba wonke lomphakathi oyisiphephelo.
Inhloso yalokhu kubambisana ukusebenzisana ukukhuthaza umqondo wezinto eziphilayo ezahlukahlukene ngokwabelana ngolwazi, ukwakhiwa kwamakhono, kanye nomsebenzi wokumemelela, kanye nokwenza i-AfricArXiv ibonisane nontanga bamazwe e-Afrika nasemhlabeni jikelele ngemikhuba emihle nokusebenza okugciniwe kwesizukulwane esizayo.
"I-Open Science akumele ibhekwe njengomkhuba kodwa isidingo futhi ukwakha lokhu kubambisana ne-COAR kuyisinyathelo esiqonde ekunyuseni imiphumela yocwaningo lwase-Afrika kanye nokubonakala,"
Umqondisi we-TCC Africa uJoy Owango
Ukubambisana kuzokwenza ukuthi amalungu eqembu le-TCC e-Afrika kanye ne-AfricArXiv akwazi ukuzibandakanya ezingxoxweni nasezindabeni eziphathelene nezinqolobane kanye nesayensi evulekile, futhi kuthuthukise ukuqonda kwe-COAR ngezingqinamba nezinselelo ezimeni zase-Afrika.
“Sijabule kakhulu ukungena kulobambiswano. Kubalulekile ukuthi sibe nobudlelwano ngqo nababambiqhaza e-Afrika, njenge-TCC Africa kanye ne-AfricArXiv, ukuze sikwazi ukuqinisekisa ukuthi inethiwekhi yomhlaba wonke yezinqolobane kanye nezinqubomgomo ezivulekile zesayensi nemikhuba iyabandakanya futhi iyabhekana nezidingo ezikhona kuleli zwekazi. ”
UKathleen Shearer, Umphathi we-COAR
Mayelana neConfederation of Open Access Repositories (COAR)
I-COAR yinhlangano yomhlaba wonke enamalungu ayi-157 kanye nabalingani abavela emhlabeni wonke abamele imitapo yolwazi, amanyuvesi, izikhungo zocwaningo, abaxhasi bakahulumeni nabanye abavela emazweni angaphezu kwama-50 kuwo wonke amazwekazi amahlanu. Umbono we-COAR wukulondolozwa kolwazi lomhlaba wonke okusimeme, okubandakanya futhi nokwethembekile okususelwa kunethiwekhi yamakhosombe wokufinyelela ovulekile.
Mayelana ne-TCC Africa - Isikhungo Sokuqeqesha Kwezokuxhumana
Isikhungo Sokuqeqesha Kwezokuxhumana (i-TCC Africa), yisikhungo sokuqala sokuqeqesha esizinze e-Afrika ukufundisa amakhono okuxhumana asebenzayo kososayensi. I-TCC Africa iyinhlangano enqoba iTrust, esungulwe njengenhlangano engenzi nzuzo ngo-2006 futhi ibhaliswe eKenya. I-TCC Africa inikeza ukwesekwa kwamandla ekwenzeni ngcono ukuphuma kwabaphenyi nokubonakala kwabo ngokuqeqeshwa kwezokuxhumana kwezazi nezesayensi. nama-webinar womthamo wokucwaninga. Ukwesekwa kudluliselwa ezikhungweni zocwaningo nakuhulumeni. Kusukela i-TCC Africa isekele abacwaningi abangaphezu kwe-5,800, abavela emazweni angaphezu kwamashumi amathathu nesithupha (36) ahlukene kanye nezikhungo ezingaphezu kwamashumi ayisishiyagalombili (80) ababambe iqhaza ezifundweni ezinde nezimfushane ezinikezwayo.
Mayelana ne-AfricArXiv - ipulatifomu yokugcina evulekile ye-Afrika
Yethulwe ngoJuni 2018, i-AfricArxiv iyinqolobane yedijithali eholwa ngumphakathi yezokuxhumana ngocwaningo lwase-Afrika. Sinikezela ngeplatifomu engenzi nzuzo yokulayisha amaphepha asebenzayo, amaprinta, imibhalo yesandla eyamukelekayo (okushicilelwe ngemuva), izethulo, namasethi wedatha ngamapulatifomu kazakwethu. I-AfricArxiv izinikele ekucwaningeni nasekusebenzisaneni phakathi kososayensi base-Afrika, ukuthuthukisa ukubonakala kokukhishwa kocwaningo lwase-Afrika kanye nokwandisa ukusebenzisana emhlabeni jikelele.
I-TCC Africa iyinhlangano yabalingani abangamasu futhi ngomqondisi wayo uNks Joy Owango ubambe isihlalo ebhodini labeluleki le-AfricArXiv kusukela ekuqaleni. I-AfricArxiv ne-TCC Afrika bayayiqonda futhi bayayazisa ubuchwepheshe obufanele ekukhuthazeni ukukhishwa kocwaningo lwekhwalithi kanye nokwenza ngcono amakhono okuxhumana ocwaningo phakathi kososayensi ezwenikazi lase-Afrika ngokubambisana ne-COAR.
Tags: Izikhundla ZedijithaliI-TCC Africa
I-AfricArXiv isekela i-COAR ekufakweni kwayo kokuthi “Ukukhethwa Kwedatha Yokugcina: Imigomo Ebalulekile” - I-AfricArXiv	· Ngomhlaka 2 Disemba 2020 ngo-5: 50 ekuseni
[…] Inhlangano yabalingani be-COAR ngokubambisana ne-TCC Africa, i-AfricArXiv yabelana ngezikhalazo eziphakanyiswe […]